တစ်ဦးကသူတောင်းစားကွင်း | Apg29
ငါတို့သည်အဘယ်သို့ကယ့်ကိုမခေါ်နဲ့ Hard ရှိသည်သူတစ်ဦးသူတောင်းစားကြောင်းသိရသလဲ ဒီတစ်ခါလည်းကကောင်းတစ်လိဂ်နောက်ကွယ်မှပါပဲ။
မနေ့ကလက်ဆောင်သူ့ဟာသူမရှိဘဲအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးရိုသောသူသည်ခေါ်တော်မူ။ သူကလည်းကျိုးဆှီဒငျတွင်ချက်ချင်းပြောနေတာစတင်ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲအတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမတိုင်မီစက္ကူမှဖတ်ပါ။
တစ်စုံတစ်ဦးကသူ၏နာမကိုမပြောပါဘူးအခါတိုင်းငါကသူကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်သူကဖြေဆိုပေမယ့်ပြောနေတာကိုဆက်လက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ သူကသူတို့ကင်ဆာကနေဖျားနာခဲ့ကြခြင်းနှင့်တကယ်ခက်ခဲကြောင့်ခဲ့သူ၏မိသားစုအကြောင်းကို sob ပုံပြင်များပြောပြစတင်ခဲ့သည်။
ငါသည်အလျင်အမြန်သူ့အမှုအတွက်ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ပဲနားလည်။ ငါခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ငါနားလည်သဘောပေါက်မဟုတ်သလိုစီရင်နိုင်မပေးသောအမည်တစ်ခုတင်းမာ fuzzy တုံ့ပြန်မှုတယ်ဘယ်အရာကိုတခါမေးတယ်။ ငါသူနထေိုငျသညျ့နရောဟုမေးနှင့်ရိုမေးနီးယားကြားပြောလေ၏။
သငျသညျသင်တန်းဆွီဒင်၏လုပ်နိုင်, ငါကလည်း, ဒါပေမယ့်သူကရိုမေးနီးယား၌ရှိ၏ဟုပြောသည်။ ဒါပေမယ့်ဆဲလ်ဖုန်းသူဆွီဒင်ကနေတောင်းဆိုခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ သငျသညျဆွီဒင်ကနေခေါ်ပါ, ငါကလည်း, ဆက်လက်: သင်လဲလျောင်းနေတဲ့! ထိုအခါငါ goodbye ဟုဖွင့်ဆွဲထားကြ၏။
ထိုလူကသူခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်များအပြင်ဘက်တွင်ထိုင်လျက်ယားသူတောင်းစားသူတို့ခရစ်ယာန်နှင့်ရိုမေးနီးယားအတွက်အမျိုးမျိုးသောအသင်းတော်များအဖွဲ့ဝင်များကပြောသည်ပေမယ့်တက် check လုပ်ထားသောအခါကတရားစွဲဘယ်တော့မှဘယ်မှာငါပြီးသားကိုသိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
သင်တန်း၏, သငျသညျလိုလျှင်, ဆင်းရဲငတ်မွတ်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအကူအညီနဲ့လူတွေကိုနေသော, ဒါပေမယ့်မျက်လုံးပြာရောင်နှင့်နုံဖြစ်, နှင့်သင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်ရေးရာအသက်တာကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သောကွောငျ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပဲအသုံးပြုခွင့်မပြုပါဘူး။
တကယ်တော့ဒါဟာတော်တော်ပိုက်ဆံတွင် (ထိုသူတို့အရူး?) တောင်းယေရှုကိုယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များကိုဝန်ခံဖို့အိမ်ကဖုန်းဆက်ဖို့အအေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင်ယုံလွယ်သောခရစ်ယာန်များကိုတွေ့ရှိရန်ပိုက်ကွန်ပတ်ပတ်လည် surfed ပါတယ်။ ငါအရင်ကသူတောင်းစား၏ရှုပ်ထွေးရကွပွီ။ ငါတို့သည်အဘယ်သို့ကယ့်ကိုမခေါ်နဲ့ Hard ရှိသည်သူတစ်ဦးသူတောင်းစားကြောင်းသိရသလဲ ဒီတစ်ခါလည်းကကောင်းတစ်လိဂ်နောက်ကွယ်မှပါပဲ။
ယခင်ကငါအပေါ်အမှုအရာ foist လိုသူ telemarketers မရှိဟုတစ်ခက်အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သဘောထားကကျနော်အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပဲလက်လွတ်မနိုငျသောကမ္ဘာ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်မမိုက်မဲဖြစ်ကြောင်းကိုအခါအစဉ်မပြတ်ငါယုတ်ညံ့သလိုခံစားရတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သူတို့ကိုတဦးဖျောင်းဖျနှင့်ဝယ်ပါစေ, ငါနောက်မှလိမ်လည်လှည့ခံစားရတယ်။
သို့သော်ယခုငါတိုက်ရိုက်ငါစိတ်မဝင်စားဘူးမမြေပြင်ကဆိုသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါ့ကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားရန်ဟောပြောချက်ကိုမည်သို့ပင်ဆိုစေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကျွန်မကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူချက်ချင်းရပ်တန့်ပေမယ့်ဖော်ရွေနှုတ်ဆက်နှင့် Hang တက်။ သူတို့ကိုငါအခွင့်အလမ်းမပေးပါဘူး။
ငါကခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခပါလိမ့်မည်သူကိုငါကြောင်းကိုနားလည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းက, ဒီတော့ဘူးငါ့ကိုမကောင်းတဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်ပေးထားပေမယ့်မရခဲ့သည်။ ငါအားကောင်းဖြစ်လာစေရန်နှင့်အရာ၏ဤကြင်နာတက်မတ်တပ်ရပ်ပေးဖို့အများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပါပွီ။
ထိုကွောငျ့, သငျသညျအဘယ်သူမျှမပြောဝံ့သငျ့သညျ။ မည်သူမဆိုသင်တို့သည်နောက်လို့ပြောတဲ့အခါသင်ညံ့လို့ရှုပ်ထွေးခံစားရစေမထားပါနဲ့။ အကြီးခံယူချက်နဲ့ရဲရင့်နှင့်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်၌ခိုငျမွဲရပ်တယ်။ အသုံးပြုသောရမထားပါနဲ့။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမပြောပါလျှင်သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး, လျော့နည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်လာပါဘူးနေကြသည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုငါတို့သည်သူတို့ကိုပိုက်ဆံတောင်းစားအတူပြုကြသနည်း သူတို့အထံတော်ခံယူနိုင်ပြီးကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ထာဝရအဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဒါပထမဦးဆုံးဌာန၌ငါတို့သည်သူတို့သညျယရှေု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ဘဝအသက်တာ၌အချို့သောအမိန့်အရတော့မှပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံးဌာန၌, ကျနော်တို့သူတောင်းစားသညျယရှေုကိုပေးမည်! တဖန်ငါဆိုသည်ကားကိုပထမဦးဆုံးသောအရပ်တွင်, ကျနော်တို့ကသူတောင်းစားသညျယရှေုကိုပေးမည်! ထိုမှသာသူတို့ beggary ဝေးကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်! ထိုအခါသင်သည်လူမှုရေးအရသူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ယရှေု, ထို့နောက်လူမှုရေးအကူအညီများကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးမဟုတ်! ထို့ကြောင့်, သင်ပထမဦးဆုံးကသူတို့ကိုယရှေုသညျ, အဲဒီနောက်လူမှုရေး-အကူအညီပေးသင့်ပါတယ်!